Ihe omumu banyere ahia: Ndi anyi nwere ike ikwu eziokwu? | Martech Zone
Na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ SaaS ogologo oge, m na-anọgide na-asụ ude ka m na-ebudata ma na-agụ ọmụmụ ihe. Ekwela m na-ezighị ezi, M n'ezie na-arụ ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ ebe anyị chọpụtara a ahịa na-eme ihe ịtụnanya na anyị n'elu ikpo okwu ma ọ bụ ndị na-enweta ịrịba pụta… na anyị na-kewapụrụ na-akwalite a ikpe ọmụmụ banyere ha.
Ahịa abụghị naanị inweta, ọ bụ ezie. Ire ahia bu ichoputa atumatu di uku, inye ha nyocha ha choro iji zuta ahia, ma jigidekwa ndi ahia buru ibu nke gha eme ka nloghachi gi na ahia ahia.
Tọlite ​​atụmanya nzuzu n'aka onye ahịa na-adịghị mma abụghị nnukwu ahịa, ọ bụ ya na mgbasa ozi ugha - belụsọ na edere ya ede n ’ọfụma ma bụrụkwa eziokwu.
Ndụmọdụ maka ide ihe ọmụmụ ihe dị mma
Anaghị m ekwu zere ọmụmụ ihe nke ndị ahịa enwetala nnukwu nsonaazụ. Echere m na ọ bụ usoro dị oke mma ịkekọrịta akụkọ banyere ndị ahịa gị ndị ritere uru ma ọ bụ jiri ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị rụọ ọrụ nke ọma. Mana edetu ihe omumu a, ikwesiri ịkpachara anya na ichota ihe gi na onye ahia gi… ma obu onye ahia nke gha eme ka ihe omumu a megharia mkpebi nke ndi otu ha. Lee ụfọdụ ndụmọdụ:
Mụrụ - nye ụfọdụ ndabere na ndị ahịa na ihe ha na-agbalị iji nweta.
Ndị ọrụ nchịkwa mmadụ - kwuo okwu n’ime akụrụngwa talent na mpụga nke onye ahịa tinyere nke nyere aka nweta nsonazụ dị ịtụnanya.
Ihe mmefu ego - kwuo okwu banyere mmefu ego nke dị na ntinye.
Oge oge - oge na usoro iheomume na-ekere oke oke na otu ụzọ ụzọ nwere ike isi nweta nsonaazụ. Jide n'aka na ịkekọrịta ha n'ime ọmụmụ ihe gị.
nkezi - setịpụ atụmanya na nkezi nsonaazụ ndị ahịa ga-enweta na-enweghị talent, mmefu ego, na usoro iheomume nke onye ahịa a tinyere.
Mgbo na Oku-apụ - kpachara anya ịkọwapụta niile ihe ndị dugara na nsonaazụ dị elu.
Atingkọwa onye ahịa natara nkwụghachi ego nke 638% bụ nnukwu ihe ọmụmụ iji kesaa… mana ịtọ ntọala maka otu ha siri nweta ya karịa ngwaahịa na ọrụ gị dị mkpa!
Setting -atụ anya bụ usoro dị oke egwu maka ndị na-ere ahịa ịbawanye njigide na ndu ndu nke ndị ahịa ọ bụla. Y’oburu n’inwe olile anya na-adighi nma nke ndi n’ahia ahia na apughi iru, igha n’enye ndi ahia iwe. Na nke ziri ezi, na uche m.
Echiche gha, Nghahie, na antsgha
Enwere m olileanya na ị ga-enwe obi ụtọ na ya Echiche gha, Nghahie, na antsgha usoro anyị na-arụ ọrụ! Ha na-enweta nlebara anya na ọwa mmekọrịta anyị na m hụrụ mbọ ndị mmekọ anyị na Ablog Cinema na-etinye n'usoro.
Nke a bụ Transcript:
AJ Ablog: [00:00] Doug, lelee ya. N'ihi ya, m hụrụ ọmụmụ ihe a, ma azụrụ m agwa anwansi ndị a.
Douglas Karr: [00:06] Anwansi anwansi?
AJ Ablog: [00:06] Anwansi kọfị ndị a bụ anwansi, ee. Ha kwesiri ịgwọ kansa.
Douglas Karr: [00:10] have nwere kọfị kọfị nke na-agwọ kansa?
AJ Ablog: [00:12] Enwere m agwa kọfị, ee. Lee? Naanị gụọ ya, gụọ ya.
Douglas Karr: [00: 16] Nsọ na-ese siga. Na-agwọ kansa. Nwoke isi nkwọcha. Erectile adịghị arụ ọrụ. Afọ ntachi. Oge egwu.
AJ Ablog: [00:23] Ọ na-edozi Count [Choculitis [00:00:24].
AJ Ablog: [00:27] Mba, nke ahụ bụ ihe nkiri. Ihe nkiri ahụ na-akwado ya.
Douglas Karr: [00:30] Ngwa ngwa ịntanetị na-agba ọsọ? M na-eche onye dere na ikpe ọmụmụ.
AJ Ablog: [00:34] Amaghị m, naanị m hụrụ ya, agụrụ m ya, o doro anya na ọ bụ eziokwu.
Douglas Karr: [00:37] Kedu ka o si arụ ọrụ?
AJ Ablog: [00:39] Anwalebeghị m ya.
Douglas Karr: [00:41] Ka anyị gaa kọfị.
AJ Ablog: [00:43] Ọ dị mma, ka anyị mee ya.
AJ Ablog: [00:51] Na Na Na Na My-
Douglas Karr: [00:52] Echiche ndị na-ezighi ezi-
AJ Ablog: [00:53] Na Rants, ihe nkiri ahụ ebe mụ na Doug nwere mmasị ikwu maka ihe na ịntanetị na-ata anyị ahụhụ.
Douglas Karr: [00:59] Ee, na ihe ngosi nke oge a banyere nkwa, nkwa ndị ụlọ ọrụ na-eji ọmụmụ ihe.
AJ Ablog: [01:05] Dika nkwa nna gi kwere ma ghara imezu ya.
Douglas Karr: [01:10] Nke ahụ bụ ụdị ọchịchịrị. Mana ị na-ahụ nke a kwa ụbọchị, ọkachasị na m nọ na sọftụwia ọtụtụ, yabụ ana m enyere ụlọ ọrụ sọftụwia aka. Ha na-otu ahịa, ha nwetara otu ahụkebe, ịrịba N'ihi tinye n'ọrụ ha software, na ha na-ekwu, "Oh Chineke m, anyị nwere dee na ikpe ikpe." Yabụ inweta ọmụmụ ihe a, ọ bụ etu sọftụwia a siri dị 638% ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ma ihe bụ, ọ bụ na ha nwere ọtụtụ puku ndị ahịa, otu onye ahịa wee nweta nsonaazụ ahụ. Anyị agaghị ekwe ka nke ahụ mee ebe ọ bụla ọzọ. Anyị agaghị ekwe ka otu ụlọ ọrụ ọgwụ na-arịa ọrịa kansa na-ewere ọgwụ aspirin ozugbo ọrịa kansa ha lara, wee sị, “Hey, ọgwụ aspirin a na-agwọ kansa.” Anyị agaghị ekwe ka nke ahụ mee, mana maka ụfọdụ ihe gbasara ọmụmụ ihe, anyị na-ahapụ ya oge niile. Nsogbu bụ na e nwere ụlọ ọrụ achụmnta ego na ndị na-azụ ahịa na-aga ebe ahụ wee gụọ ọmụmụ ihe ahụ, ma ha-
AJ Ablog: [02:15] Ha amaghị n'ezie.
Douglas Karr: [02:16] Ee, ọ dị ha ka ọ bụ eziokwu, dịka a gaghị ekwe ka ụlọ ọrụ gha ụgha.
Nkwupụta okwu: [02:21] Ọ bụghị ụgha ma ọ bụrụ na ị kwenye ya.
Douglas Karr: [02:24] Na ụlọ ọrụ anaghị agha ụgha.
AJ Ablog: [02: 27] Mana ha anaghị agwa gị eziokwu niile.
Douglas Karr: [02:29] Right. Ha bụ ụdị nke iji ọnọdụ kachasị mma. Ma eleghị anya, ọ bụ usoro ịzụ ahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ha nwere otu ndị ahịa ahịa dị ukwuu, ọ bụkwa oge ha na-azụ ahịa kachasị, onye na-asọ mpi na-apụkwa n'ahịa, na ọnụahịa ha nwere ike ịdaba. Yabụ ihe ndị a niile jikọtara nsonaazụ ha site na 638%.
AJ Ablog: [02:52] Ọ dị mma, ma ọ bụ na ọ dị ka ụlọ ọrụ vidiyo na-ekwu, "Hey lee, lee ka mkpọsa a siri dị ukwuu," belụsọ n'eziokwu na akara ahụ enweela ezigbo ndị na-eso. Ha mere ihe ha kwesiri ime na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ bụghị vidiyo n'onwe ya, mana ọ bụ ihe ndị ọzọ niile ejikọtara ya, mgbe ahụ, ha na-anara otuto na-asị, "Oh, lee ihe vidiyo m meere gị."
Douglas Karr: [03:12] Right. Ya mere, m ga - asị na dịka ụlọ ọrụ, otu n'ime nsogbu ndị ị na - abanye na ala nke ahụ bụ mgbe ị na - atụ anya nnukwu atụmanya ndị ahụ na onye ahịa, na ugbu a onye ahịa ahụ na - abata n'ụgbọ ahụ mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ ikpe ahụ ma na - atụ anya ụdị arụmọrụ ahụ.
AJ Ablog: [03:31] Otu nsonaazụ ahụ, ee.
Douglas Karr: [03:32] Ya mere, ụlọ ọrụ ndị a ọtụtụ oge na-atụba ihe ọmụmụ ikpe ahụ n'ebe ahụ, ha na-anya isi na ya, ha na-amalite inweta azụmahịa na ya, mgbe ahụ, ha na-enwe nkụda mmụọ ndị ahịa. Ya mere, ihe m bụ, ọ bụrụ na ị ga-eme ihe ọmụmụ, anaghị m ekwu na ị naghị eji otu onye nwere nsonaazụ pụrụ iche.
AJ Ablog: [03:47] Ọ bụ eziokwu, na enwere ọtụtụ ọmụmụ ihe dị mma ebe ahụ.
Douglas Karr: [03:49] Ee, mana kwuo eziokwu n'ọmụmụ ihe ahụ. “Hey, nke a abụghị ụdị ụdị mmeghachi omume anyị na-enweta. Ihe ndị a abụghị ụdị ụdị nsonaazụ. Nke a bụ ihe atọ dugara uto na ewezuga ikpo okwu anyị ma ọ bụ sọsọ sọftụwia ahụ. ”
AJ Ablog: [04:04] Aka nri. Na-ekwu eziokwu ma setịpụ ihe ị tụrụ anya ya.
Douglas Karr: [04: 06] Ee, kwuo eziokwu. Echere m na ọmụmụ ihe bụ ohere dị ịtụnanya iji kụziere onye ahịa gị ọzọ ma ọ bụ atụmanya gị ọzọ banyere ihe ga-ekwe omume, mana ọ bụghị ihe ga-abụ ụkpụrụ.
AJ Ablog: [04: 20] Ọ bụ eziokwu, ị bụghị otu n'ime ndị ahịa 3:00 AM na-asị, "Nke a ga-eme gị oge ọ bụla n'ihi na nke ahụ bụ ihe anyị na-eme."
Azụmaahịa: [04: 29] Ma ọmarịcha omume banyere omume ndị a katanas… oh, na-afụ ụfụ. Oh Nke ahụ merụrụ nnukwu oge. Otu nke, naanị n'ọnụ ahụ nwetara m, Odell.
Douglas Karr: [04:40] Maka ndị ahịa na azụmaahịa ndị gụrụ gbasara ihe ọmụmụ, biko were nnu nnu ma ọ bụ bughachi ha azụ. Ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu, "Anyị na-enweta ụdị 638% ROI," inupụ azụ na-ekwu, "Gịnị bụ nkezi ROI na ị na-na-na ahịa?" Ma mgbe ahụ maka ụlọ ọrụ ndị na-ewepụta ihe ọmụmụ ndị a, kwuo na nke a bụ nsonaazụ pụrụ iche nke ụmụ okorobịa a nwetara, mana anyị ga-agwa gị maka ya n'ihi na ọ bụ ihe okike, ma lee ihe ndị ọzọ niile dabara na ya. Ma ugbu a, ihe ị na-eme bụ na ị na-enyere onye ahịa gị ọzọ aka, ị na-asịkwa, “Hey, Ọ ga-amasị m ịnweta nsonaazụ ha nwetara. Amaara m na ikekwe anyị agaghị enweta ndị ahụ, mana lee, mgbe ha mere nke a, nke a, nke a, na nke a- “
AJ Ablog: [05: 24] “Ma anyị nwere ike ime ụfọdụ yiri nke ahụ-“
Douglas Karr: [05:26] "Anyị nwere ike ime ihe yiri ya ma bawanye nsonaazụ anyị," echekwara m na nke ahụ bụ… ya mere, pụọ na bandwagon a nke na-egosi naanị nnukwu ihe ị rụpụtara, yana ịtọ ndị ahịa gị anya na ihe ndị ị na-atụghị anya. Ma maka ụlọ ọrụ na ndị na-azụ ahịa na-azụ ihe, nwee obi abụọ. Nwee obi abụọ banyere ọmụmụ ihe ndị ahụ.
Okwu: [05: 49] Enwere m ike imeghe anya gị. Enwere m ike imeghe anya gị.
AJ Ablog: [05:57] Ọ dị mgbe ụmụ okorobịa na-eduhie gị site n'ọmụmụ ikpe ma ọ bụ mgbasa ozi n'ụdị ụdị ọ bụla? Ọ ga-amasị m ịnụ ha na nkọwa ndị dị n'okpuru. Ọ bụrụ na vidiyo a na-amasị gị, jide n'aka na ị masịrị ma denye aha, anyị ga-ahụ gị na vidiyo ọzọ.
Tags: ikpe ọmụmụ ụghaVidio Ahịamyths